Migove miviri yehushumiri hwaErisha inomiririrei?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Migove miviri yehushumiri hwaErisha inomiririrei?
Migove miviri yehushumiri hwaErisha inomiririrei?
Eria akatumwa naMwari kunotsvaka Erisha kuti amuzodze.
I MADZIMAMBO 19:19 Naizvozvo akabvapo, akandowana Erisha mwanakomana waShafati, wakanga achirima nenzombe dzakasungwa pamajoko ane gumi namaviri, iye ari pajoko regumi namaviri; Eria akapfuura nokwaari, akakanda nguvo yake pamusoro pake.
Eria akanotsvaka munhu aishanda nesimba, kwete kurara nekuita hunyope. Majoko ane gumi namaviri anoyanana nemarudzi gumi namaviri avaIsraeri. Joko rechigumi nembiri rinozomiririra rudzi rwechigumi nembiri rwavaIsraeri, aive mwanakomana wegotwe Benjamini. Paakaberekwa mai vake Rakeri vakabva vafa. Kana maJuda 144 000 vakazvarwa patsva munguva yeKutambudzika kukuru, rudzi rwevaJuda runobva rwafa mauto aAntikristu asati aparadzwa paAmagedhoni. Saka Benjamini anomiririra maJuda 144 000 vanoponeswa munguva yekutambudzika kukuru. Nguvo yakafukidza Erisha inomiririra kuzodzwa kwemweya waErisha.
20 Iye akasiya nzombe, akamhanya achitevera Eria, akati, "Nditenderei henyu ndimbondotsvoda baba vangu namai vangu, ndigokuteverai." Iye akati kwaari, "Chidzoka hako, nokuti ndakuiteiko?"
Erisha akabva ada kutevera Eria pakarepo. Akawonekana nevabereki vake sezvo aive asingazovaoni zvakare. MaJuda vachapinda munguva yeKutambudzika kukuru vanotongwa nemadzitateguru avo uye vakuru vavo kupfurikidza tsika dzavo. Muprofita wekupedzisira Eria kuvaJuda achabatsira Mosesi kutendeutsa maJuda kubva kutsika dzemadzibaba avo uye Murairo weTestamente yekare kuti vagone kugamuchira Kristu uye kuti vasadzokere zvakare kutsika nezviito zvevabereki vavo.
Kuratidza kuparadzana kwake kwakazara nehupenyu hwaairarama, akatema tema joko remuti kuti avese moto akauraya nzombe mbiri dzaive paJoko akabika nyama yadzo. Saka akaparadza zvinhu uye nzombe dzaaisevenzesa.
Asi maJuda 144 000, vaimiririrwa naBenjamini, vachaurayiwa pakupera kwenguva yeKutambudzika. Ndicho chikonzero nei Erisha akauraya joko rimwe renzombe. Joko pacharo, rakagadzirwa nemuti, rakapiswa mumoto kuti ribike nyama. Izvi zvinomiririra moto wekurwadziswa wenguva yeKutambudzika kukuru, unopisa joko rehuranda raive rakabata maJuda muhuranda pamurairo. Nekutadza kukunda simba remauto aAntikristu, zvisinei nekusimba kwesimba ravanaro pachavo rezvehondo, maJuda achatanga kuvimba nesimba remweya unoshamisa revaprofita vavo vaviri kuti rivachengetedze. Nekutendeukira kuna Kristu vanobva vaparadzana zvakazara nehupenyu hwavairarama. MaJuda 144 000 vanouraiwa pakupedzisira, chinguvana mumashure maizvozvo vanobva vamutswa kubva kuvakafa kuti vaite basa rekuchengetedza Mwenga waKristu.
ZVAKAZARURWA 14:1 Zvino ndakatarira, ndikavona Gwaiana rimire pagomo reZiyoni, rinavamwe vanezvuru zvinezana namakumi mana navana, vanezita raro, nezita raBaba varo, rakanyorwa pahuma dzavo.
4 Ndivo vasina kusvibiswa navakadzi; [Mukadzi chiratidzo chekereke sezvo kereke yechokwadi ndiyo mwenga waKristu. MaJuda aya haana kusvibiswa netsika dzemasangano emakereke anhasi nekutadza kwawo] nokuti vakanaka semhandara. Ndivo vanotevera Gwaiana kwose kwarinoenda. Ndivo vakadzikinurwa pakati pavanhu, kuti vave zvibereko zvokutanga kunaMwari nokuGwaiana.
Zvibereko zvokutanga zvinotaura zvakare nezvekumuka kwevakafa.
I VAKORINTE 15:20 Nokuti zvino Kristu wakamutswa kuvakafa, akava chibereko chokutanga chavavata.
Kune rumuko pakupera kwemakore 1 000 eMereniyamu mukati mawo Jesu anotonga norugare. Asi maJuda 144 000 vanomutswa pakupera kweguva yeKutambudzika Mereniyamu isati yatanga. Saka ndivo vachatanga kumutswa mumashure mekutorwa kweMwenga kuenda Kudenga. Saka zvakadaro ndivo chibereko chekutanga cherumuko rweruzhinji ruchatevera mumashure meMereniyamu. Zvibereko zvekutanga ndidzo tsama dzehura hwekoroni dzinotanga kuibva mumunda, saka zvakadaro dzinoratidza kuti rimwe goho rese richaitika nekukasika munguva inouya.
Zvipenyu zvina zvinochengetedza chigaro chaMwari chehushe. Kereke yechokwadi ndiyo muviri waKristu nekuti iye oga ndiye musoro wekereke.
Saka zvipenyu zvina zvakachengetedza kereke mukati memakore 2 000 enhorondo yekereke. Asi hapana chipenyu chakataura pakavhurwa Chisimbiso chekutanga. Saka nguva dzemakereke dzapera. Takutarisana zvino nemaJuda vakafa mukati memakore 2 000 enhorondo yekereke. MaJuda aya akafira kupupura kwawo sezvo vaive vakabatirira paTestamente yekare. MaKristu anobatirira kupupura Jesu sezvo vakafa kuzvido zvavo uye havadi chero budiriro kubva kusimba ravo kana kuzvipira kwavo.
ZVAKAZARURWA 6:10 Vakadana nenzwi guru vachiti: Tenzi mutsvene wazvokwadi, mucharega kutonga vanogara panyika nokuvatsiva ropa redu kusvikira riniko?
Nguva dzemakereke dzinenge dzapera Mwenga anenge atorwa aenda kudenga. MaJuda anotenda kuti ziso kuziso, saka vanoda kutsiva. Vakauraiwa mumazuva avo nekuda kwekuti maJuda. Apa vanenge voda kutsiva Satani. Panguva iyi Mwenga anenge ava kudenga, saka havaone chikonzero nei vasingakwanisi kudzokera panyika kunoparadza Antikrustu muvengi wavo. Ava havasi maKristu. MaKristu anonamatira kuti vavengi vavo varegererwe.
Nguvo chena dzakapiwa kwavari. Havana kufanira ruponeso asi vakarupiwa. Nekuda kwei?
MATEO 27:25 Vanhu vose vakapindura vakati, ropa rake ngarive pamusoro pedu navana vedu.
MaJuda apa vakabvuma kuripira zvivi neropa ravo neropa revana vavo. Saka Mwari akavapa saizvozvo. Mukati menguva nomwe dzemakereke, maJuda airarama neTestamente yekare nepavaikwanisa napo, uye vakauraiwa nekuda kwekuti maJuda, vakaenda kuDenga. Vaive vasina kufanira ruponeso urwu. Asi zve, isuwo maHedeni hatina kufanirawo kuwana ruponeso zvakare. Dzaingova nyasha dzaMwari kwatiri tese.
Saka maJuda ese akauraiwa mukati memakore 2 000 akadarika vakaudzwa kuti vamirire zvishoma. NeMwenga Kudenga kuchiri nemakore matatu nehafu enguva yeKutambudzika kukuru, mukati mayo maprofita maviri vanodaidza hama dzavo maJuda, 144 000, avo vanodiwa naMwari sevarindi vemweya kuti vave varanda vake kupfurikidza kuchengetedza mwenga wake ane nhengo zhinji kereke. Ava ndivo vega maJuda achararama nenzira imwe ichararama maKristu akazvarwa patsva. Asi semaJuda vanofanira kufa. Mwari ovamutsa zvakare. Mumashure meizvi munhu wese anoenda panyika kunoparadza chakaipa paAmagedhoni.
MaKristu vanakomana nevanasikana vaMwari. MaJuda varanda vaMwari.
Basa iri rekuchengetedza vakadzi vazhinji vanenge varoorwa namambo muchinyakare raiitwa nengomwa. Saka maJuda 144 000 ndivo ngomwa dzemweya vakasarudzwa naMwari kuti vachengetedze Mwenga wake. Kana vagamuchira Jesu vanobva vaziva kuti iri ndiro richava basa ravo nguva inouya.
MATEO 19:12 Nokuti ngomwa dziripo, dzakaberekwa dzakadaro kubva mudumbu ramai; ngomwa dziripo, dzakaitwa ngomwa navanhu; ngomwa dziripo dzakazviita ngomwa nokuda kwovushe hwokudenga. Ungagamuchira shoko iri, ngaarigamuchire.
Apa tinoona kuti Erisha akatevera sei Eria.
Muchidimbu ichi chehushumiri hwavo, Eria anomiririra Jesu Erisha anomiririra kereke yechokwadi.
II MADZIMAMBO 2:1 Zvino nguva yakati yasvika Jehovha yaakada kukwidza Eria nayo kudenga nechinyamupupuri, Eria akaenda naErisha vachibva Girigari.
Nguva dzemakereke dzinoperera nekukwira kwevatsvene kudenga, kutorwa kwekereke kuenda kudenga. Erisha akagarira pedyo naEria apo Eria akaita zvinhu zvina.
Eria akaedza kumudzinga asi Erisha akaramba achitevera.
2 Eria akati kuna Erisha, "Iwe chigara pano,nokuti Jehovha wakandituma Bhetieri." Erisha akati, "NaJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiyi." Naizvozvo vakaburukira Bhetieri.
Beriteri zvinoreva kuti imba yaMwari. Haugoni kupinda mumba maMwari usina kuponeswa. Saka izvi zvinomiririra kururamisirwa kwaLuther nekutenda.
Jeriko zvinoreva kuti “hwema hunonhuwira hwakanaka”. Calvari yaive hwema hunonhuwira zvakanaka mumhino dzaMwari.
VAEFESO 5:2 Fambai murudo, Kristu sezvaakakudai vo, akazvipa nokuda kwedu, kuti ave chipo nechibayiro kunaMwari, zviite bwema bwunonhuwira.
Masvingo eJeriko akawira pasi. John Wesley akaparidza hutsvene uye kuparidzira kwakaparadza masvingo emasangano uye muono wemakereke une miganhu vanoparidzirana pachavo mumakereke mavo. Mamishinari vakatora Evangeri kuriisa kuvaHedeni munguva huru yemamishinari. MaKristu mazhinji akabva amirira apa.
6 Eria akati kwaari, "Iwe chigara pano, nokuti Jehovha wakandituma kwaJorodhani." Iye akati, "NaJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiyiyi." Ivo vari vaviri vakapfuura havo.
Erisha akaramba achitevera. Tinofanira kuramba tiri padyo naJesu paanofamba. Jorodani rinomiririra rufu, kufa kuzvido zvedu zvenyama. Rubapatidzo rweMweya Mutsvene runotiita kuti tife kuzvido zvedu zvenyama. Kereke yechokwadi yakaenda mberi kuPentecosti vakakunda kuita izvi asi vazhinji vakabva vamira ipapo.
7 Zvino varume vana makumi mashanu vavanakomana vavaporofita vakaenda vakandomira pakatarisana navo vari kure; ivo vari vaviri vakamira paJorodhani.
Vanonamata mumasangano uye veMharidzo vanogamuchira Mweya Mutsvene vobva vamira kure chaiko neShoko (Eria) nekuti Jesu akamira kunze kwemakereke ese eRaodikia nhasi uno. Saka Chokwadi chizhinji cheMagwaro chinoramba chiri chakavanzika nekuti nekuda kwekutsanangura kunoitwa nevanhu kusingabvi muMagwaro.
II MADZIMAMBO 2:8 Ipapo Eria akatora nguvo yake, akaipeta, akarova mvura, ikaparadzaniswa napakati, naizvozvo ivo vaviri vakayambuka pakawoma.
Eria aivimba nenguvo yake, zvaimiririra Shoko rakazodzwa raive rakamufukidza. Jesu akafa paCalvari akafamba mumvura dzerufu kuti akunde Satani, akanoparidzira mweya yakarasika mutorongo uye kunosunungura vatsvene veTestamente yekare kubva kuParadiso kuti aende navo Kudenga. Patinofa pazvido zvedu zvenyama tinofanira kurarama neMagwaro zvakazara sezvo mafungiro edu nemazano edu asina zvaanoreva. Ipapo chete ndipo patinowana nzvimbo muShoko raMwari kana muhurongwa hwaMwari hwakarurama.
9 Zvino vakati vayambuka, Eria akati kuna Erisha, "Kumbira chandingakuitira, ndichigere kubviswa kwauri." Erisha akati, "Ndipei migove miviri yomweya wenyu."
Migove miviri zvinoreva kuti mukati memakore 2 000 kereke yese yakaita minana yakawanda kukunda yakaitwa naJesu munguva yehushumiri hwake.
Asi kuswedera zvakanyanya pedyo naMwari kuti tione Mweya zvese nechokwadi chinhu chakaoma kwatiri vanhu.
II MADZIMAMBO 2:11 Zvino vakati vachifamba, vachingotaurirana havo, ngoro yomoto namabhiza omoto zvikasvika, zvikavaparadzanisa ivo vaviri; Eria akakwira kudenga nechinyamupupuri.
Eria akakwira Kudenga chiratidzo chezvichaitika pakupera kwenguva dzemakereke.
Chinyamupupuri chiratidzo chekushaiwa zororo.
Tarisirai kusagadzikika kwezviitiko kuzhinji panokwira Mwenga waKristu kudenga.
Izvi zvinosimbisa chinhu chakakosha zvakare pamusoro pekukwira kudenga: Mwari anotora mumwe achisiya mumwe. Zvinoreva kuti vashoma vachaenda.
33 Aninani unotsvaka kungwarira vupenyu bwake, ucharashikirwa nabwo, vuye aninani unorashikirwa nabwo, uchabwuraramisa.
Zvinhu zvichave zvakaomarara kukunda zvatinofungira.
34 Ndinoti kwamuri: Vusiku ubwo varume vaviri vachava panhovo imwe, mumwe uchatorwa, mumwe uchasiyiwa.
35 Vakadzi vaviri vachakuya pamwe chete, mumwe uchatorwa, mumwe uchasiyiwa
II MADZIMAMBO 2:12 Erisha akazviona, akadanidzira, achiti, "Baba vangu, baba vangu, ngoro yaIsiraeri navatasvi vayo vamabhiza " Akasazomuonazve; akabata nguvo dzake akadzibvarura napakati.
Apa zvinhu zvada kutanga kurasisa kana tikatarisa pamigove miviri yakagamuchirwa naErisha.
Kuti tiwane chirevo pazviitiko zvinotevera nenzira inoratidza kana kuratidzira zviitiko zvenguva yekupedzisira, tinofanira kutarisa Erisha semunhu, muprofita.
Hushumiri hune simba hwechiprofita hunomiririrwa naErisha ndehupi kana Mwenga atorwa akwira kudenga? Humwechete hungadaro huri ihwo, muprofita wekupedzisira kumaJuda Eria anouyira maJuda 144 000.
Izvozvi tinotarisa migove miviri yakagamuchirwa naErisha:
Akabvarura nguvo dzake kuita zvidimbu zviviri. Izvi zvine zvirevo zviviri. Chekutanga, achamiririra hushumiri huviri hwenguva inouya.
Saka hushumiri hwechipiri hunokwana sei mazviri hunoratidzira mweya waEria wekutanga? Tichadzoka padambudziko iri.
Humwechete hwehushumiri uhu hunoyananiswa nenguvo yakabvaruka.
Kefasi muprista mukuru akavhara Murairo nekubvarura nguvo yake nehasha paakatuka Kristu.
EKSODO 28:2 Uitire Aroni, mukuru wako, nguvo tsvene, akudzwe nadzo, uye huve ukomba.
Aroni aive muprista mukuru.
EKSODO 28:31 "Unofanira kuita jasi reefodhi rose romucheka mutema.
Efodhi inguvo yakasimba yekurwa nayo yakaitwa nekurukwa nemacheni ine marupu maduku edare. Buri rakapoteredza huro rakasimbiswa kuti rirege kubvaruka.
Pakuidzwa kwake pamberi pemuprista mukuru Kefasi,
MATEO 26:64 Jesu akati kwaari ndizvozvo zvawataura; asi ndinoti kwamuri,kubva zvino muchavona Mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba, achivuya namakore okudenga
65 Ipapo muPirisita mukuru akabvarura nguvo dzake akati wamhura Mwari! Tichatsvakireiko zvapupu? Tarirai manzwa zvino kumhura kwake.
Nekubvarura nguvo dzake nekutsamwa kwekupenga, muprista mukuru akatyora murairo.
Mwari akabva aita mucherechedzo wekuguma kwemurairo kupfurikidza kubvarura chidzitiro chetemberi muzvidimbu zviviri pakafa Jesu.
Saka Erisha anotiita kuti titarise pachitiko ichi apo Mwari akabva kumaJuda nekunamata kwavo kwemutemberi.
Erisha aive nemigove miviri. Achamiririra hushumiri huviri hwenguva inouya.
Pauro navapostora vakaita nheyo dzekereke. Chokwadi ichi chizhinji chakabva charasika munguva yeRima. Chokwadi chakambonzi dzoswei nevamutsiridzi vakaita saLuther naWesley nevePentecosti. Asi muprofita wenguva yekupedzisira kuvaHedeni anodiwa kuti adzose chokwadi chakazara.
Munhu uyu aive William Branham. Aive nehushumiri hwakanakisa mumweya unoshamisa akazivisa zvakavanzika zvose zvinodiwa neMwenga kuti azive kuti adzokere padzidziso dzekereke yekutanga yevapostora. Hakuna muHedeni ati amboratidzira hushumiri hwakadai hwesimba. Hakuna muHedeni ati amboratidzira hushumiri hune simba semigove miviri.
Kana William Bramham akadzosa zvinhu zvose, saka hakusisina chimwe chinhu chekuti anouya kumashure kwake adzose. Hakuna achamutsiva anokwanisa kutidzosera ruviri, sezvo kuri kutaura kusina zvakunoreva.
Asi William Branham akauya nguva yeKutambudzika isati yatanga.
Saka hushumiri hwake hungashande sei panguva yekutambudzika?
Mune mamwe mashoko, migove miviri yaErisha inomiririrei?
Mugove mumwechete unokwanisa kumiririra hushumiri hwaWilliam Branham sei kana mumwe mugove uchimiririra muprofita Eria wekupedzisira anouya naMosesi kumaJuda munguva yeKutambudzika kukuru?
Mhinduro kutsoro iyi ndeyekuti Eria wekupedzisira wechiJuda achadzidza zvakavanzika zveShoko raMwari kubva kudzidziso dzaWilliam Branham, kubva ipapo anobva akwanisa kutendeutsira maJuda 144 000 kunaJesu. Achavawo nesimba guru rinoshamisa kuti agone kukunda mauto aAntikristu.
Erisha akashandiswa naMwari kuti aite hushumiri hwaEria wekupedzisira kumaJuda anounza maJuda 144 000 kuEvangeri reTestamente Itsva. Asi munhu uyu anofanira kudzidza zvakavanzika zveBhaibheri zvakaziviswa naWilliam Branham. Saka hushumiri hwaWilliam Branham hunopinda pahushumiri hwaEria wekumaJuda wekupedzisira zvisingadzivisiki.
Saka Erisha, nemigove yake miviri, achaita kana kugadzira nzira yehushumiri hwaEria hwakatanga kuzodza William Branham kuti atungamirire Mwenga wenguva yekupedzisira, uye pechipiri kuzodza muprofita wekupedzisira kumaJuda anouya naMosesi kuzotungamirira maJuda 144 000.
Migove miviri zvinoreva kuti chokwadi chinovandudzwa ruviri. Pekutanga, Mwenga wekupedzisira wechiHedeni kupfurikidza dzidziso dzehama Branham, anodzoserwa kudzidziso dzevapostora. Zvino kuvandudzwa kwechipiri ndipo panotorwa chokwadi chenguva yekupedzisira naEria kuenda nacho kumaJuda kuti vazvarwe patsva vadzoserwe kunaMessiasi wavo, Jesu, uyo akamborambwa nemaJuda.
Migove miviri inorevawo kuti William Branham naEria wechiJuda vose vane hushumiri hune simba kwazvo.
Saka ngatichiteverei nhorondo yaErisha.
Kana tichiti kukwira Kudenga kwaEria chaive chiratidzo chekereke yechokwadi ichikwira kudenga kunosangana naShe mumakore, saka panguva iyi yehushumiri hwake, mumashure mekukwira kudenga, Erisha aiita nzira yehushumiri hwemuprofita Eria wechiJuda.
II MADZIMAMBO 2:13 Akanonga Jazi raEria rakanga rawa, kwaari, akadzoka akamira pamhenderekedzo yaJoridani.
Jazi inguvo. Isu takafukidzwa nekuzodza kweShoko raMwari.
Shoko rakazodzwa rakaziviswa nehama Branham richatorwa nemuprofita kuvaJuda vanofanira kuyambuka rwizi kuti vadzokere munyika yechipikirwa. Zvinomumiririra achiuya kumaJuda anhasi vakadzokera kuIsraeri kunomirira muprofita wavo.
14 Akatora jasi raEria rakanga rawa kwaari, akarova mvura, akati, "Jehovha Mwari waEria uripiko?" Zvino wakati arova mvura, ikaparadzaniswawo napakati, Erisha akayambuka.
Maprofita echiJuda Mosesi naEria vachatevera tsoka dzedzidziso dzakasiiwa nehama William Branham sezvo achizivisa Jesu achifamba nemapeji eBhaibheri.
Tarisai kuti Mosesi anotii nenyaya yekuzara kwevuMwari paachaparidza munguva yeKutambudzika kukuru.
4 Ndianiko ungarega kutya nokukudza zita renyu, Ishe? Nokuti imi moga muri mutsvene;
Rwiyo rweGwaiana runomudaidza Ishe Mwari waMasimbaose. Gwaiana rega ndiro ritsvene. Saka kana muine vamwe vanhu vaviri mukuzara kwevuMwari, zvino hapana mutsvene pakati pavo. Saka Mosesi haaparidzi Tiriniti.
II MADZIMAMBO 2:19 Zvino varume veguta vakati kuna Erisha, "Tarirai, henyu, nzvimbo yeguta yakanaka hayo, sezvamunoona, ishe wedu, asi mvura yakaipa, nenyika haibereki zvakanaka."
Jeriko ndiyo nzvimbo yakatanga kukundwa nekutorwa naJoshua. Masvingo akasimba (zvichimiririra kutenda kwemapegani) akawira pasi.
Erisha aimiririra muprofita wemaJuda wekupedzisira Eria, akatanga kuparidza kwake achiparidza Kristu zvichawisa “masvingo” akasimba etsika dzechiJuda.
“Jeriko” zvinoreva “kunhuwira kwake kwakanaka”. Kufa kwaKristu kwave hwema hunonhuwira kana munhuwi wakanaka mumhino dzaMwari. Maprofita echiJuda achadzosa maJuda paCalvari.
MaJuda anotambira muprofita wavo mutsva. Asi dzidziso yechitendero chechiJuda haina zvibereko nekuti havana Messiasi kuti avaponese. Hamuna mvura yehupenyu mutsika dzechiJuda.
II MADZIMAMBO 2:20 Iye akati, "Ndivigire ndiro itsva, mugoisa munyumo." Vakamuvigira iyo.
Munyu unochengetedza nekumisa kuora. Munyu unotiita kuti tinzwe nyota. Uyu mucherechedzo waKristu.
21 Akaenda kuchitubu chemvura, akadira munyu imomo, akati, "Zvanzi naJehovha, `Ndarapa mvura iyi, hapachazobvipo rufu, kana kusabereka.' "
22 Naizvozvo mvura ikarapwa kusvikira, nhasi sezvakataura, iye Erisha.
Chitubu kana nzvimbo inowanikwa mvura nemaJuda iTestamente Yekare. Tsika nekupira kwemaJuda kwakauraya hupenyu hweTestamente Yekare. Muprofita anodira Kristu, anomiririrwa nemunyu, muTestamente Yekare odzidzisa maJuda kuti Murairo nezviprofita zvakazadziswa sei muna Kristu, akazova Messiasi wavo uye anokwanisa kuvaponesa. Kuziva Kristu kunoisa hupenyu uye chirevo muTestamente Yekare.
II MADZIMAMBO 2:23 Zvino wakabvapo, akaenda Bhetieri; akati achikwira nenzira, zvikomana zvikabuda muguta, zvikamuseka, zvikati kwaari, "Iwe nyamanza, kwira, iwe nyamanza, kwira!"
24 Iye akacheuka, akavaona, akavatuka nezita raJehovha. Ipapo maperekadzi maviri akabuda mudondo, akaparadza vana vana makumi mana navaviri vavo.
Betieri zvinoreva kuti imba yaMwari. Hamukwanisi kupinda mumba maMwari kunze kwekunge makaponeswa neRopa raJesu. Betieri rinomiririra ruponeso, nhanho yekutanga yerumutsiridzo pasi paLuther apo kereke yaibuda muNguva yeRima.
Eria wedu wemaHedeni, hama Branham, vaifanira kutendeutsa vana panguva yekupedzisira vachivatendeutsira kumadzibaba mapostora vekereke yekutanga vakanyora Testamente Itsva.
Avo vanosvibisa zvakaparidzwa nehama Branhama vachapedzisira vapinda munguva yeKutambudzika kukuru votarisana nekutuka kwaMwari.
Vana vaduku vakauya ava vaive maHedeni akaponeswa, vanodaidzwa kuti vasikana vakarara, vakaramba kana kusatevera kana kutsvinyira mharidzo yaWilliam Branham. Saka vakasiiwa saka vakatsamwa kwazvo nekuda kwekusatorwa kuenda kudenga, zvisinei nekuva nhengo dzekereke dzakanakisa, zvekuti vakutanga kutsvinyira Eria wechiJuda asinawo kutorwa kuenda kudenga.
Gondo rine mhanza ndicho chiratidzo chenyika yeAmerica saka sezvo muprofita wekupedzisira kuvaHedeni (kana kuti gondo) akabva kuAmerica nekuona kwakwe kunopinza kwakamupa muono wakadzama mukati mezvakavanzika zveMagwaro, gondo rine mhanza chiratidzo zvakare chakamiririra muprofita wekuAmerica William Branham.
“Mhanza” muchirungu rinodaidzwa kuti “bald” izwi rechirungu rekare rinoreva ruvara ruchena. Gondo ndereruvara rupfumbu nemusoro muchena. Saka vana vaduku ava vakamutsvinyira semuprofita. Vakamuti kana aivewo gondo rinemhanza (kana muprofita), akaregererei kuenda kudenga sezvakaita Eria?
Asi mhanza kana kuti pachena zvinorevawo kuti kupinza kana kurwadza sezvazvinoshandiswa mumutsara unoti “mhinduro iri pachena haina akadzidza, chingori chokwadi chinopinza”.
Vana, vasikana vakaponeswa asi vakarara, vakatsvinyira kana kumhura mharidzo yehama Branham vakapesana nekukwira kudenga. Apa vanofunga kuti vanokwanisa kutsvinyira zvakare Eria wechiJuda. Asi vakakanganwa kuti vaive vapinda munguva yeKutambudzika kukuru pakusisina Mweya Mutsvene kuvaHedeni, unenge uriko kuvaJuda chete. Saka Erisha, saEria wechiJuda, akavapa mhinduro iri “pachena” inopinza uye inorwadza. “Imi vasikana vakavata makatsvinyira nekuramba muprofita wenyu wevaHedeni. Kristu akabva kumaHedeni ave kumaJuda. Saka hakusisina nyasha kana tsitsi kwamuri maHedeni. Mose makatukwa naMwari kuti mufire kutenda kwenyu munguva yeKutambudzika kukuru. Saka ifai”.
Mwari akabva kumaJuda achienda kuvaHedeni makore 2 000 akadarika. Kumashure kwaizvozvo maJuda aifira kutenda kwawo. Saka Mwari paachabva kuvaHedeni achienda kumaJuda munguva yeKutambudzika kukuru, ipapo maHedeni akaponeswa anenge apesana nekukwira kudenga vachafanirawo kufira kutenda kwavo.
ZVAKAZARURWA 13:15 Chakapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chiraire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vavurawe.
MaKristu ose akaponeswa vachapesana nekukwira kudenga vachapinda munguva yeKutambudzika vachauraiwa.
Vana vaive makumi mana nevaviri. Ndiro gwara rinoyananisa chiitiko ichi nemwedzi makumi mana nemiviri yeNguva yeKutambudzika kukuru.
Russia ine bere (bear) pachiratidzo chenyika yayo.
MaMediani nevekuPersia vane miganhu yenyika inobva kuTurkey kusvika kuAfghanistan (nhasi tinovadaidza kuti maMosiremu) vaive vakamiririrwa nebere mukuprofita kwaDanieri.
Mapere maviri echikadzi.
Mukadzi anomiririra kereke kana bato rezvechitendero.
MaRussia echiOrthodix nemaMosiremu vanokoshesa chitendero zvakanyanya, asi vane zvimwe zvavanotenda zvakaipa. MaMosiremu akazvipira paruvengo rwavo kuvaIsraeri neAmerica. Tinobatira Mwari murudo, kwete neruvengo.
Vana munguva yeKutambudzika kukuru vanomiririra maKristu emasangano vakaramba chokwadi cheBhaibheri chakaziviswa, nevatendi veMharidzo vakaponeswa vakakoshesa mashoko akabatwa paitaurwa mumharidzo dzakasiyana siyana pachinzvimbo chekumadzosa kuBhaibheri kuti vaone chokwadi chawo. Saka vatendi veMharidzo vanopedzisira vachitenda zvinhu zvisina kubvira zvatendwa mazviri nevatendi venguva yekereke yekutanga. (“Vemasangano” uye “vatendi veMharidzo” ese mazwi asiri muMagwaro asina waachaponesa. Vekereke yekutanga vachadaidzwa kuti maKristu. Tinofanira kutevera muenzaniso wavo. Izwi rekuti pasita (mufudzi) watinoti nhasi “mufundisi” rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva zvisingamupi chero simba rekutonga kereke.) nekuti nhasi uno vemakereke vane mukana wekudzidza chokwadi, asi vanoramba pfungwa yekutsigira chokwadi neMagwaro, vachabvarurwa munguva yeKutambudzika kukuru nevanhu vekuRussia nemaMosiremu vachapepuka votanga kuona kuti vaive vachinyengerwa nevakuru vezvitendero zvavo saka voziva kuti vakarasika. Vachatsamwa kwazvo pamusoro pevasikana vakarara vaive nemukana wekudzidza nekudzidzisa chokwadi, asi vakarasa mukana wavo nekuda kwerudo rwavo rwekuturikira zvakataurwa nevanhu. MaRussia nemaMosiremu vakaputirwa kwazvo muzvitendero zvavo zvekuti vane mukana muduku kwazvo wekudzidza chokwadi nhasi uno.
II MADZIMAMBO 2:25 Akabvapo akaenda kugomo reKarimeri, akabvapo akadzokera Samaria.
Gomo reKarimeri ndiko Eria kwaakadana moto ukaburuka kubva kudenga akauraya vaprofita vaBaari 450. Saka izvi zvinoratidza kuti nguva yeKutambudzika iriko uye simba raMwari rinoshamisa richaonekwa muhondo yakaipa pakati pemaprofita maviri naAntikristu. Vatendi vazhinji venhema vachauraiwa apo Eria wechiJuda achatora munondo weShoko raMwari.
Zvino mambo weMoabi paanouya kuzorwisa, Erisha akavaita kuti vachere makomba akazadzwa neMvura kupfurikidza mweya unoshamisa. Mvura yairatidzira mirazvo mitsvuku yezuva remangwanani zvikatarisika senzvimbo yarwiwa hondo izere ropa. Nekutenda kuti maJuda aive auraiwa maMoabi akamhanyira kunoba mumatente mavo, sechikwata chevanhu vasina kurongeka ipapo maJuda akarongeka vakabva vabuda vakauraya maMoabi.
Izvi zvinoratidzira kushanda kwenzira dzakachenjera dzichibatsirwa nemweya unoshamisa apo Eria wechiJuda achabatsira kuchengetedza maJuda kubva kuhondo dzaantikristu.
Apa rudzi rweminana runoshanduka.
Munana watabva pauri unotsanangura zvakanaka zvichaitwa naEria wechiJuda wekupedzisira munguva yeKutambudzika.
Minana mishoma inotevera inokwanisa kuzomiririra vose William Branham naEria wechiJuda wekupedzisira. Izvi zvinoreva kuti Eria wechiJuda achadzidza chokwadi chakawanda kubva kudzidziso dzaWilliam Branham chaachashandisa kutendeutsa maJuda kuti vazvarwe patsva.
Erisha akazobatsira chirikadzi kuwedzera mafuta ayo kuti azadze makate akawanda. Izvi zvinoratidza kuti Eria wechiJuda achadzosera sei Mweya Mutsvene kumaJuda. Mweya Mutsvene uchavatungamirira muchokwadi chese, sekutungamirirwa kwakaitwa Mwenga neMweya kupinda muchokwadi.
JOHANE 16:13 Kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose;
Erisha akabva aprofita kuti mukadzi ngomwa achave nemwanakomana mwanakomana wake paakazofa, akazokwanisa kudzosa mwanakomana uyu kuti ararame zvakare. Izvi zvinoratidza kuti Eria wechiJuda achaunza Hupenyu husingagumi kumaJuda kuti vazvarwe patsva. Izvi zvinotoredzera zvakare kubata kwehama Branham paMwenga wemuHedeni.
II MADZIMAMBO 4:38 Zvino Erisha akaendazve Girigari, nzara yakanga iripo panyika; vanakomana vavaporofita vakanga vagere pamberi pake, akati kumuranda wake, "Gadza hari huru, ubikire vanakomana vavaporofita zvokudya."
39 Zvino mumwe akaenda kusango kundotanha miriwo, akawana muti unotanda, akatanhapo magaka, akazadza nguvo yake nawo, akasvika akaachekerera muhari yezvokudya, nokuti vakanga vasingaazivi.
40 Zvino vakapakurira vanhu kuti vadye. Ivo. vakati vodya zvokudya, vakadanidzira, vakati, "Munhu waMwari, rufu ruri muhari." Vakasagona kuzvidya.
MaJuda aive asina zivo akawana muti unotanda wemusango unomiririra dzidziso inokura kunze kweBhaibheri. Chero chinhu chiri kunze kweBhaibheri chinounza rufu.
Saka maJuda munguva yeKutambudzika kukuru, semaHedeni anhasi mukereke, achave netsika dzisingaperi dzinenge dzisiri muBhaibheri. Izvi zvinokwanisa chete kuvaparadza. “Mufundisi mukuru”, “Tiriniti”, “Isita egi”, “maIsita rabiti”, “Achibhishopu”, “Cardinari”, “Pope”, “Renti”, ‘Ashi Wednesday”, “Rozari”, “Chipiyaniso”-- mutsetse wepfungwa dzevanhu unokura nekunyeka kunge hosha. Pfungwa idzi “dzinotanda” sezvo dzisina kunyorwa muMagwaro.
II MADZIMAMBO 4:41 Asi iye akati, "Uyai noupfu." Akahudira muhari, akati, "Chipakurai henyu, vanhu vadye." Zvino kwakanga kusine chinhu chakaipa muhari.
Kristu ndiye chingwa chehupenyu. Chingwa chinogadzirwa nehupfu. Saka kuisa hupfu muhari zvinoreva kuti akavaunza kuna Kristu, akadira Kristu mukutsanangura kwavo kwese kwavanoita Magwaro. Anozovaratidza kuti Magwaro akazadziswa sei muna Kristu.
Zvimwechete zvakaitika kwatiri vaHedeni apo hama Branham vakatiratidza Jesu achifamba nemapeji eBhaibheri kuti tinzwisise zvinotaurwa neBhaibheri. Kana mukakoshesa Kristu muhupenyu hwenyu uye mukakoshesa Bhaibheri, ipapo panenge pasina chakaipa mukudya kwemweya kwamunodya. Saka Eria wechiJuda anodzosa maJuda kudzidziso imwechete yakatendwa neMwenga waKristu.
Erisha aive nezvingwa makumi maviri nechibage kana mbesa. Akaita kuti chikafu ichi chiwande akapa vanhu zana chekudya. Simba rake rinoshamisa raipa maJuda chekudya nekuvachengetedza.
Minana yakanyorwa mumaBhuku mana eEvangeri yaive yekupa vanhu 5 000 uye 4 000 zvekudya. Jesu paakapa vanhu chingwa nenyama (mucherechedzo wedzidziso) kuvanhu 5 000, kwakaita matengu gumi nemaviri emafufu akasara.
Paakapa vanhu 4 000 chekudya kwakaita matengu manomwe emafufu akasara. Izvi zvinoratidza kuti marudzo gumi nemaviri evaIsraeri vachadya chikafu chakafanana nechakapihwa kereke kuti ipedze kana kudarika nguva nomwe dzemakereke. Mwenga nemaJuda 144 000 vachaguma vakutenda muchinhu chimwechete.
Namani muSiria (muHedeni) aive nemaperembudzi muHedeni uyu aifanira kunyikwa mumvura dzeJorodani kanomwe kuti arapwe. Izvi zvinomiririra nguva nomwe dzemakereke apo vaHedeni vanosukwa mumvura dzeShoko kuti varapwe uye vagezwe kubva kuzvivi. Munana uyu unoita kuti zvive pachena kuti Eria wemaJuda ari kuuya kumaJuda neEvangeri rimwechete rakauya naWilliam Branham kumaHedeni paakazivisa zvakavanzika zvenguva nomwe dzekereke yevaHedeni, uye zaruriro yekuvhurwa kweZvisimbiso zvinomwe pakupedzisira zvakazozivisa kuzara kweShoko kuti kusatenda kwedu kusukwe.
Muranda waErisha Gehazi akabva anyengera Namani kuti amupe mari, yaive yarambwa naErisha.
Chinhu chakaipa pano ndechekuti vabatsiri vaWilliam Branham, saGehazi, vakaita makaro emari vakarasika. Gehazi akapedzisira aita maperembudzi.
Uyu ndiwo moyo wemigove miviri yaErisha. Akaratidzira hushumuri huviri hwanaEria VAVIRI vachauya kumashure kwake.
Hushumiri hwake hunoratidzira mafuta (Mweya) nechingwa (Chokwadi) zvinounza hupenyu kungomwa uye kudzosa vakafa hunova hunhu kwezvitendero zvemaHedeni sekudzoswa kwazvakaitwa naWilliam Branham. Tichiwedzera, chero pakaita chingwa chishoma chemweya Mwari anokwanisa kuchiparadzira kuvanhu vazhinji. Saka vanhu vasina kuonekwa, vane mukana mushoma vane kubata kukuru pachokwadi kukunda makereke makuru ane vanhu vazhinji. Kana kutadza kukaturikira zvinotaurwa neBhaibheri kuti kukonzerese rufu rwemweya, ipapo kukoshesa Kristu pamavhesi ese kunounza hupenyu. Kudzosa hushumiri hwaive hwarasika mukati menguva nomwe dzemakereke ndizvo zvakabva zvakosheswa nehushumiri hwaWilliam Branham.
Chikwata ichi cheminana chinoratidza kuti Eria wemaJuda achaunza dzidziso yakadzidziswa naWilliam Branham kumaJuda.
Munana wedemo raive rakanyangarara pamusoro pemvura unoshanda pahushumiri hwese hwaWilliam Branham uye hwaEria achauya kumaJuda. Asi unobva watanga kutendeukira kukosha kwawo kuna Eria wemaJuda. Mimwe minana yese yakanotevera apa yakanangana naEria wechiJuda, apo anenge apedza kudzosa maJuda 144 000 kuti azive Chokwadi cheBhaibheri chakaziviswa.
II MADZIMAMBO 6:1 Zvino vanakomana vavaporofita vakati kuna Erisha, "Tarirai zvino, apa patigere pamberi penyu pakamanikana, hapatiringani.
Vateveri vevaprofita havana rudo rwekuzvipira kuita basa raMwari vanodisa kwazvo hutefetefe nezvenyika ino. “Mitemo yakawandisa, uye kuongororesa”, ndiko kunyunyuta kwavo nguva dzose. Kuita kuri kukura zvakanyanya “muchichechi-chechi” chanhasi. Kuva “maKristu” hazvisisina kukwanira. Tinoda kudaidzwa nemazita akaita sekuti “vatendi veMharidzo” kunyange kuri kudaidzwa kusiri muBhaibheri.
“Mufundisi wenyu ndiyani?” Uyu mubvunzo usina kubvira wabvunzwa muBhaibheri. Isu tinozviona zvakakosha. Saka takatorasana neMagwaro.
“Mufundisi ndiye musoro wekereke” kutaura kusimo zvachose muMagwaro. Saka kuva nemufundisi semukuru kwekereke hazvisi muMagwaro.
“Mufudzi ndiye mufundisi” kutaura kusimo muMagwaro.
Kuita kwemakereke edu kwatinodisa, hakukwani mumavhesi eBhaibheri nenzira yarakanyorwa naro.
Hatikwanisi kuwana 25 Zvita kana zuva reKisimusi muBhaibheri. Bhaibheri rakataura pamusoro pemuti wakashongedzwa kuna Jeremia Chitsauko 10, asi rinodzidaidza kuti tsika dzavaHedeni dzatisingafaniri kutevera. Hapana muti weKisimusi? Asi “vanoda Kereke” vakaita izvi kwemakore mazhinji.
Mabhavhudhe akataurwa kaviri, pana Farao naHerodhe. Vose vaive vaurayi. Ndeupi pakati pevarume vaviri ava wamungade kufanana naye?
Saka kuedza kugara muchitevera Magwaro zvakazara zvinorema. “Vanoda kereke” vanozvibvisa paBhaibheri kana vakatanga kuita tsika dzavo nezvinyakare. Vanoda mukana wekuita zvinhu nenzira dzavo. Vanoda pfungwa dzinotanda semuti wemusango dzisimo muBhaibheri. Idzi ndidzo nzira dzinofunga nemaKristu anhasi. Kutaura kuti “Zvakanyorwa zvichinzi...” hazvisisina kukosha kwavari.
Saka chinhu chikuru ndechekuti kereke iri kuparadzaniswa neBhaibheri. Shoko raMwari, Jesu, amire kunze kwekereke yeRaodikia.
II MADZIMAMBO 6:2 Titenderei henyu tiende kwaJorodhani, mumwe nomumwe atore dandapo, tizvivakirepo patingagara." Iye akapindura, akati, "Endai henyu."
3 Zvino mumwe akati, "Tinokumbira kuti imi mutende kuendawo navaranda venyu." Akapindura akati, "Ndichaenda."
4 Naizvozvo akaenda navo. Vakati vasvika kwaJorodhani, vakatema matanda
Saka vaimutevera vakaramba vachida kuti muprofita ataure nekuita zvavaida ivo kuti zvitaurwe nekuitwa. Kwete zvakataurwa neBhaibheri.
5 Asi mumwe wakati achitema danda, demo ndokuwira mumvura; akadanidzira, achiti, "Haiwa! Tenzi wangu! Nokuti rakanga rakumbirwa."
Demo rakakumbirwa. Raive remumwe munhu. Vanhu havachatende mune zvavo vega zvachose. Vanotevedzera zvakataurwa nevamwe vanhu. Rudo rwemari rwakaita kuti munhu uyu atye kushandisa mari yake pane zvaaida. Saka akakumbira kubva kune mumwe munhu. Vanotenda kuMharidzo vanokumbira zvakataurwa nevamwe vanhu kuti vayananisire mifungo yavo yakabviswa kare kuBhaibheri.
Kristu ndiye musoro wekereke. Chiitiko ichi chinoratidza kuparadzaniswa kwekupedzisira kwaKristu (musoro wedemo) nekereke muRaodikia (mubato waro). Kutevera zvido zvavo nerudo rwavo rwemifungo yakachenjera, kereke yarasikirwa naKristu parizvino amire kunze kwekereke . Kurasikirwa nemusoro wedemo zvakaita kuti pashaikwe basa sezvo paive pasisina panotema. MaKristu anotya kuburitsa zvakaipa pachena. Havataure pachena vachipikisa zvivi apo vanoedza zvakanyanya kuva nembiri. Havapikisi kutadza kwekereke sezvo zvinozovashaisa mari uye kurumbidzwa nevanhu kwavanodisa. Vanhu mukereke vanotya kupikisa mufundisi. Johane Mubapatidzi akadaidza vakuru vezvitendero kuti nyoka. Vanotenda mumasangano eMharidzo vanotya kwazvo kubvuma kuti vakuru vavo, vafundisi, vanokwanisa kuva vachikanganisa. Johane Mubapatidzi aive nedemo rinopinza. Nhasi uno tingori nemubato waro usina maturo nekuti haugoni kutema.
Saka vanotenda kuMharidzo vanoita sevari mushishi zvakanyanya uye vakabatikana nekusevenza asi vasina chavanoburitsa. Vanokura pakuwanda muhuwandu hwavo asi kwete pakunzwisisa Magwaro. Vanoratidzika zvinodadisa asi musina pundutso mukuonekera kwavo. Zvinhu zvese zvinoitwa zvemweya kunze kwezvegumi.
Kushingirira kwavo pakubata kuti vazadzise kuda kwavo kunobvisa kunzwa kusakosha kwavo apo vanobva mukuda kwaMwari.
Johane Mubapatidzi akaisa demo pamudzi wemuti. Akasvika pamudzi wedambudziko. Akaudza vanhu chinhu chaicho chavaitadza. Demo rake raikwanisa kutema nekukuvadza. Asi mukuita uku akabvisa vanhu vazhinji muzvivi zvavo. Paaiparidza aivasiya vachirwadziwa nekuzunzikana, asi vatendeuka. Aituka kutadza kwavo kuvaita vanotevera Magwaro.
MATEO 3:10 Zvino sanhu ratoiswa pamudzi wemiti, saka muti mumwe nomumwe usingabereki zvibereko zvakanaka unotemwa ukakandirwa mumoto.
Johane Mubapatidzi ndiye aive mugadziri wenzira paKuuya kwaKristu kwekutanga. Akanongedzera vanhu kuna Jesu ari munhu.
William Branham aive mugadziri wenzira yeKuuya kweChipiri. Akanongedzera vanhu kuna Jesu ari Shoko raMwari. Aida kuti titsigire kutenda kwedu neMagwaro. Akaburitsa pachena zvitendero zvedu zvisiri muMagwaro zvinoratidza kuti kereke (mubato wedemo) waive usisina kubatanidzwa nemusoro wedemo (Shoko) wakafukidzwa zvekusara usingaonekwe mumvura dzedzidziso dzemakereke, tsika uye mifungo yevanhu.
Hama Branham vakazivisa zvakavanzika zvakavanzwa zvaMwari naJesu Kristu achidzoka pakuonekwa sezvo tinogona kumuona achifamba nemapeji eBhaibheri. Asi paakafa vaparidzi vakabva vatanga kufonyora zvaakataura vakaumba pfungwa itsva dzisimo muBhaibheri dzakaita sekuti Gore rakatorwa mifananidzo makiromita 43 mudenga rikabva raita Mutumwa akauya panyika kuzomutsa vakafa nekugumisa nguva. Saka zvakare zvinotendwa nekereke zvizhinji hazvisisina nheyo dzeBhaibheri. Mubato warasa musoro wedemo.
Zvakare kereke iri kufamba muzvitendero zviri kunze kwemapeji eBhaibheri.
Vanotenda kuMharidzo vanoziva Zita Idzva raJesu. Asi Bhaibheri rinoti hakunomunhu unoziva Zita iri.
Iyi ndiyo sarudzo yamunosangana nayo. Munokwanisa chete kuva nhengo “yeveMharidzo” (kudaidza kusimo muBhaibheri) kana muchirwisa Bhaibheri.
II MADZIMAMBO 6:6 Munhu waMwari akati, "rawirepiko?" Akamuratidza parakanga rawira. Erisha akatema rutanda, akarukandirako, akapapamadza demo.
7 Akati, "Chiritora hako." Iye akatambanudza ruoko rwake, akaritora.
Nei muprofita wechokwadi akaita munana mukuru wakadai wekudzosa demo pamupini waro?
Nekuti izvi zvinoratidza hushumiri hwake hwekuvandudza zvinhu.
Hama Branham vachiita kuti mwenga wenguva yekupedzisira adzokere paMusoro wedemo wenguva yekereke yekutanga wakatema chiKristu kubva muchiJuda nechiPegani.
MaJuda 144 000 achadzoserwa kuMusoro wedemo Jesu, Messsiasi wavo akamborambwa nemaJuda.
Nei musoro wedemo wakagona kuyangarara pamusoro pemvura?
Jesu Munhu uye ndiye Shoko. Ndiye ega zvakare anogona kufamba pamusoro pemvura.
Jesu ndiye musoro wedemo anotema zvivi kubva muhupenyu hwedu asina kutya kana kunyengera. Anotaura chokwadi sezvachiri, kwete nenzira yatinoda kunzwa nayo isu. Anotiudza kuti tisimbirire pakuti “Zvakanyorwa zvichinzi ...” uye kwete kutevera hutungamiri hwevanhu pavanobva pane zvinotaurwa neBhaibheri. Mupini wakabatana nemusoro wedemo ndiwo mucherechedzo wemunhu anogara nekutevera zvakanyorwa muBhaibheri. Saka mumwechete aive akakwanira kudzosa demo pamupini zuva iroro aive muprofita Erisha. Kana muprofita akabata demo, anoshandisa kunotema kwaro. “Anopa vanhu rutanda” kupfurikidza kuraira zvivi zvavo zvechokwadi uye kusaziva zvinodiwa neBhaibheri.
Kuraira kwakasimba kwemuprofita kuri kudiwa kuitira kuti chokwadi chibate mupfungwa dzevanhu. Ndicho chikonzero nei musoro wedemo wakayangarara pamusoro pemvura kuti usangane nerutanda rwawo. Saka Shoko (musoro wedemo unotema) unofamba pamusoro pemvura kuti usvike kumuprofita asingatye kubata demo kupfurikidza kugara achitevera zvinodiwa neMagwaro.
MAPISAREMA 38:1 Haiwa Jehovha, regai kundiraira pakutsamwa kwenyu, Musandiranga nokusafara kwenyu kukuru.
2 Nokuti miseve yenyu yandibaya, Ruoko rwenyu runonditsikirira kwazvo.
Chokwadi chakasimba chinogara mupfungwa dzedu. Vaparidzi vanosarudza kufadza masangano avo nekuvachengeta vari murima pamusoro pechokwadi chaicho. Ndicho chikonzero nei vanhu mumakereke vanoziva chokwadi chishoma pamusoro peBhaibheri mazuvano.
Jesu Musoro wedemo, akafamba pamusoro pemvura kuti asvike kwaive nevadzidzi vake sezvo vaizotema kereke yekutanga kubva muchipegani uye mutsika dzechiJuda. Mudzidzi Petro naJohane vaivewo maprofita makuru. Petro akafamba pamusoro pemvura semupini wainobatana neMusoro wedemo. Akabudirira chete sezvo aienda kuShoko (Jesu) achiramba akaisa meso ake panaJesu, kwete kufunga kwevamwe vanhu kana zvaiitika muhupenyu hwake.
JOBO 9:8 Iye oga anotatamura denga, Anotsika pamusoro pamafungu.
Mwari oga ndiye anokwanisa kufamba pamusoro pemvura.
Shoko raMwari rinotema, asi nhasi vaparidzi vari kuviga chokwadi pasi pemvura pavasingakwanisi kuonekwa, saka vanobva vabereka vanhu “vanoda kereke” vari mapofu vanozvifadza vakanyarara muzvido zvemoyo yavo. Kana muprofita akasvika, ipapo chete ndipo panoyangarara musoro wedemo pamusoro pemvura sezvo iye ega ndiye ane zvivindi zvekutema pazvivi zvavo nekusatenda kwavo, asina basa nekuti ndiyani achabatikana nezvaanenge achitaura.
Munguva yeKutambudzika kukuru Mwari anoda kubatanidza marudzo ese eIsraeri ari gumi nemaviri kuti vave hushe humwechete munguva yeMereniyamu, kwete hushe huviri hweIsraeri nevaJuda sezvazvaive. Mwari akaratidza izvi kunamuprofita Ezekieri nekubatanidza zvitanda zviviri pamwechete kuti zviite rutanda rumwechete.
EZEKIERI 37:16 "Zvino iwe, Mwanakomana womunhu, tora rutanda rumwe, unyore pamusoro parwo, kuti, `ZvaJudha, nezvavana vaIsiraeri shamwari dzake;' ipapo utore rumwe rutanda, unyore pamusoro parwo, kuti, `ZvaJosefa, rutanda rwaEfuremu, nezveimba yose yavaIsiraeri shamwari dzake;'
17 Zvino uzvibatanidzire matanda iwawo, ruve rutanda rumwe, ruve rumwe muruoko rwako
Muruvoko rwemuprofita Ezekieri, Juda naIsraeri vakava umwe. Chaive chiprofita chenguva inouya chaEria, muprofita wekupedzisira kuvaJuda, achave nesimba rekubatanidza marudzi gumi nemaviri aIsraeri munguva yeKutambudzika kukuru. Muprofita Erisha akakanda rutanda rumwechete mumvura. Izvi zvaimiririra hushumiri hwaEria wechiJuda munguva yeKutambudzika kukuru achabatanidza marudzi gumi nemaviri avaIsraeri totenda kusimba rake guru rinoshamisa apo anoputsanya mirairo yemamiriro ezvinhu panyika. Anobatanidza maJuda kuva rudzi rumwe kuti avaise kuMusoro wavo wedemo, Jesu.
Mvura inomiririra vanhu vazhinji vasina kugadzikika. Saka kana dutu remarudzi akatsamwa kwazvo rikasunungurwa semhepo inovhuvhuta yakasimba pamusoro peIsraeri naAntikristu munguva yeKutambudzika kukuru uye tariro yose ichiita kunge yarasika, ipapo “Musoro wedemo” Jesu anobva auya achifamba pamusoro pemvura iyoyo achiratidza kuti ari pamusoro pavo vose uye ane simba gurusa pamusoro pazvose chero kutsamwa kukuru kwemuvengi wake. Huvepo hwaShe hunoonekwa huchave muprofita wechiJuda Eria achaita minana inoshamisa kuti akundise Israeri. Nemarudzi gumi nemaviri aIsraeri abatanidzwa nerubapatidzo rweMweya Mutsvene, Jesu ipapo mumuviri wenyama “anofamba pamusoro” pemaduti ehupikisi hwehondo dzaAntikristu dzakapoteredza Israeri. Kudzoka kwake kumaJuda akabatana ndiko kuchava magumo epamweya enguva yeKutambudzika kukuru apo anozviratidza kumaJuda 144 000 vanenge vazvarwa patsva kuHupenyu husingaperi.
Pakutanga, Petro Jakobo, naJohane vakaona Jesu , Mosesi naEria Pagomo rekubwinya. Pakupedzisira chaipo maJuda 144 000 vachaona Jesu, Mosesi naEria vari vose zvakare. Ndipo pachaperera hurongwa hwaMwari.
Ko mwanakomana wemuprofita akarasa musoro wedemo? Izvozvo zvinomiririrei?
Aive asina hanya. Aiita basa raaive asingadi kuita. Achikurudzirwa nekuda kwake neshuviro dzake kuitira hupenyu hwakagazikika, akanga abva pahurongwa hwaMwari, akatoitawo kuti muprofita Erisha abvumire kurasika kwake. Ndiko kuita kwekurudziro yedu vanhu kana tikabvisa maziso edu paShoko raMwari.
Mumwe muparidzi wepamazuva aErisha, sanhasi uno, vaiita zvinhu vasina kufunga zvakazara vaifunga nezvevakadzi (kereke ichivada nekuvakoka zvakare kuti vadzoke), mari uye mbiri. Vakanyura kuhupfumi uye hupenyu hwehutefetefe uye hwakapfava. Vaive neshungu dzekuti vanzi vanobva musangano uye kutsvaga kuzivikanwa nekuda kwekungwara. Vaitsvaga zvido zvavo, vachidzingira Shoko rakanyorwa kunze kwemakereke avo kuitira kuti kereke irambe yakanyarara yakarara isina rudo rwekunzwisisa Magwaro, izvozvi vanhu vari kukoshesa kugadzirisa zvakataurwa nevanhu uye zvavanofunga ivo.
Jesu ari kunze kwekereke muRaodikia--- Musoro wedemo wakabva pamupini.
Saka kuchava nokuvandudzwa kuviri (migove miviri). William Branham achavandudza mwenga wenguva yekupedzisira kuvadzosera padzidziso dzekereke yekutanga vakasimbirira pana Kristu ari Shoko.
Eria wemaJuda paachatora dzidziso imwechete iyi kuenda nayo kumaJuda ipapo vachadzoserwa kunaKristu anova Messiasi akambouya kumaJuda asi vakamuramba.
Saka minana yekupedzisira iyi inoita kuti Erisha ave chiratidzo chehushumiri whaWilliam Branham, Eria kuvaHedeni.
Kereke yaida zaruriro yake yeBhaibheri kuti igadzirire kukwira Kudenga paKuuya kwaShe. Zvino Eria wemaJuda anodawo zaruriro yehama Branham kuti atendeutsire maJuda kuEvangeri remaKristu. Muprofita wemaJuda anenge ari mubishi kuzarura Chisimbiso chechitanhatu uye achishanda nezvakavanzika zveHwamanda nomwe neNdiro nomwe uye achitarisana nekutsamwa kukuru kwaAntikristu zvekuti haazoiti makore, sezvakaita hama Branham, kuti aburitse pachena zvakavanzika izvi pachake. Achiona kuti zvakazarurwa uye zvakuzivikanwa, anokwanisa kungozvidzidza kubva paintaneti. Anodaro arikutoita izvi izvozvi.
Minana mishoma yekutanga yemunyu, mapere maviri uye kukanganiswa kwehondo yevaMoabi zvinoita kuti Erisha ave chiratidzo chezvichave Eria kumaJuda. Rutanda rumwechete rwakasimudza musoro wedemo runomiririra marudzi gumi nemaviri echiJuda akabatana munguva yeKutambudzika kukuru, zvodzosa kukosha pamaJuda nemuprofita wavo mukuru wekupedzisira Eria.
Kana maJuda akangodzoka kuEvangeri rekereke yechokwadi inova vasikana vakangwara, ipapo minana yaErisha mitatu yekupedzisira inobva yatanga yakatarisana nekuomerwa kukuru apo maJuda 144 000 anokunda Antikristu nehondo yake inenge ichivarwisa munguva yeKutambudzika kukuru.
II MADZIMAMBO 6:8 Zvino mambo weSiria wakarwa navaIsiraeri; akarangana navaranda vake, akati, "Matende angu anofanira kudzikwa pokuti nopokuti."
9 Zvino munhu waMwari ndokutuma shoko kuna mambo waIsiraeri, akati, "Chenjerai, murege kupfuura nopokuti, nokuti vaSiria voburukira ipapo."
10 Ipapo mambo waIsiraeri akatuma vanhu ikoko kwaakaudzwa, nokunyeverwa nomunhu waMwari, akazvingwarirapo asingadaro kamwe nakaviri bedzi. [nemamwe matauriro, kakawanda]
11 Naizvozvo moyo wamambo weSiria wakanyauswa kwazvo pamusoro pechinhu ichi; akadana varanda vake, akati kwavari, "Hamungandiratidzi here, kuti ndianiko pakati patiri unonzwana namambo waIsiraeri?"
12 Mumwe wavaranda vake akati, "Kwete, ishe wangu mambo, asi Erisha muporofita, ari pakati paIsiraeri, ndiye unoudza mambo waIsiraeri mashoko amunotaura muimba yenyu yomukati."
Eria wemaJuda wekupedzisira achaudzwa mazano aantikristu ese ekurwa nawo asati arwisa nekudaro achakwanisa kukunda muvengi.
Zvino kunozotevera kupofomadzwa kwemuvengi kunoshamisa zvoita kuti vaende kunzvimbo dzisiriidzo.
II MADZIMAMBO 6:18 Zvino vakati vachiburukira kwaari, Erisha akanyengetera kuna Jehovha, akati, "Dorovai vanhu ava noupofu." Jehovha akavarova noupofu, sezvakanga zvarehwa naErisha.
19 Erisha akati kwavari, "Haizi iyo nzira, uye guta iri harizi iro; nditeverei ini, ndikuisei kumunhu wamunotsvaka." Akaenda navo Samaria.
Saka Eria wemaJuda wekupedzisira achagona kupofomadza muvengi nekumurasisa vachienda nzvimbo dzisiri dzavanoda kuenda.
Munana wekupedzisira waive apo muvengi akanokomberedza Samaria.
II MADZIMAMBO 6:24 Shure kwaizvozvo, Bhenihadhadhi mambo weSiria akaunganidza hondo yake yose, akandokomba Samaria.
II MADZIMAMBO 7:6 Nokuti Jehovha wakanga anzwisa hondo yavaSiria kutinhira kwengoro, nokutinhira kwamabhiza, kuri kutinhira kwehondo huru; vakataurirana, vakati, "Tarirai, mambo waIsiraeri wakakoka madzimambo avaHiti namadzimambo avaIjipiti kuzorwa nesu."
7 Naizvozvo vakamuka mambakwedza, vakasiya matende avo, namabhiza avo, namahesera avo, musasa wose wakangodaro, vakatiza kuti vararame.
Mwari akaita kuti muvengi anzwe ruzha rwehondo huru ine mauto mazhinji izvi zvakavatyisa kwazvo vakatiza. Kuvatyisa kwemweya kunotyisa nekuvadzikisira pakukura kwesimba ravo kwaive imwe nzira yaErisha inodakadza yekubata nayo. Saka Eria wemaJuda wekupedzisira achave nenzira zhinji dzinoshamisa kuitira kupa muvengi muganhu kuitira kuti maJuda 144 000 akazvarwa patsva akunde kunosangana naMessiasi wavo, saJosefa paakasangana nevakoma vake kuIgipita.